Anchor: Efu, Mfe, Ekwentị Mkpanaaka Podcasting | Martech Zone
Tọzdee, Machị 29, 2018 Fraịde, Machị 30, 2018 Douglas Karr
na Anchor, ị nwere ike ịmalite, dezie, ma jikwaa pọdkastị gị site na ekwentị gị ma ọ bụ desktọọpụ gị. Anchor zuru oke iji ya na enweghị nchekwa. Ndị ọrụ nwere ike ijide ngwa ọdịyo ha site na iji ngwa Anchor ma ọ bụ bulite ya na dashboard gị n'ịntanetị.
Gwakọta ọtụtụ ngalaba dịka ịchọrọ n'ime ihe omume (dịka, abụ isiokwu gị, okwu mmalite, mkparịta ụka gị na onye ọbịa, yana ụfọdụ ozi ndị na-ege ntị), na-enweghị ịme ndezi ọ bụla dị elu.
Atụmatụ Anchor gụnyere:
Ajụjụ Ọnụ Anchor - -enyere gị aka ịkpọ n'èzí.
Nkesa - na-ekesa pọdkastị gị na nyiwe pọdkastị na - akpaghị aka (gụnyere Apple Pọdkastị na Google Play Music) na naanị otu ịpị.
Agbakwunyere Player - Ọ bụrụ n’inwee blọgụ ma ọ bụ weebụsaịtị gị, ị nwere ike ịgbanye pọdkastị gị ebe ahụ ka ndị mmadụ nwee ike ige ntị na-enweghị ịhapụ saịtị gị. Jide koodu ntinye n'ime profaịlụ gị na ngwa ngwa Anchor ma ọ bụ site na dashboard gị na anchor.fm.
Ịkụ aka - Onye ọ bụla na-ege ntị na pọdkastị gị na Anchor nwere ike ịkwado oge kachasị amasị ha. A kụrụ aka na-adịgide, n'ihi ya, onye ọ bụla nke na-ege ntị ma e mesịa ga-enwe ike (ịnụ) ihe ndị ọzọ nụrụ.
Nkọwa nke ọdịyo - Ndị na-ege ntị nwere ike izipu ozi olu na ihe ngosi gị oge ọ bụla. Ha ga-enwe otu nkeji ịzaghachi, nke na-eme ka ozi gị niile dị mkpụmkpụ ma dịkwa ụtọ.
Akpaaka na-akpaghị aka - Anchor na-edekọ ụda nke etinyere na Anchor (n'okpuru nkeji 3).
Vidio mmekọrịta - mgbe ịchọrọ ị kwalite pọdkastị gị na mgbasa ozi mmekọrịta, Anchor na-ewepụta vidiyo na-aga aga, nke edere na usoro kachasị mma maka ikpo okwu ọ bụla. Ha na-akwado square maka Instagram, ihu ala maka Twitter na Facebook, na eserese maka Akụkọ.
Nchịkọta Podcast - Na Anchor, ị ga - ahụ ihe dịka ihe eji egwu gị n’agaghị aga, etu mmemme si ekekọta onwe gị, yana ngwa ndị mmadụ ji ege ntị. Ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị na-eji ngwa Anchor, ị nwere ike ịhụ onye nụrụ akụkọ nke ọ bụla, yana ebe ha jara ma ọ bụ kwuo okwu.
Bido Podcast gị
Tags: arịlịkaarịlịka 3.0atụmatụ arịlịkaanchor.fmPodcastingPodcasting ngwa